Fividianam-panafody :: Ilaharana hatrany eny amin’ireo farmasia • AoRaha
Fividianam-panafody Ilaharana hatrany eny amin’ireo farmasia
Tsikaritra ihany ny filaharana eny amin’ireo toeram-pivarotana fanafody eto an-drenivohitra na dia nandraisana fepetra aza ny fisokafan’ireo farmasia rehetra amin’ny faritra dimy, toy ny eto Analamanga, ao anatin’ny 24/24 ora. Ny fanafodin’ny Covid-19 no be mpitady, miampy an’ireo singa mampitombo ny hery fiarovana ho fisorohana ny valanaretina io.
Nilaza ireo mpivarotra fanafody fa misy filaharana foana isan’andro saingy efa somary lefilefy kosa aloha, amin’izao fotoana izao.
Nohamafisin’ny filohan’ny Holafitra nasionalin’ny farmasiana eto Madagasikara, Rakotomalala Tantely, fa niezaka nampitombo ireo farmasia nisokatra ho fanamorana ny fahazoan’ny marary ny fanafody ilainy ry zareo. « Ezahina ihany koa ny hifehy ny vidim-panafody mba tsy hisy hidangana. Tsy azo ekena, raha sanatria voaporofo ny fanararaotana amin’ny farmasia sasany », hoy izy.
Manomboka manahirana anefa, etsy an-daniny, ny fahitana karazam-panafody ilaina amin’ny fitsaboana ny valanaretina noho ny fahalanian’ny tahiry. “Tsy hoe isika no tsy te hanafatra fa ny avy any ivelany mihitsy no efa voatsinjara. Tamin’ny tapaky ny herinandro lasa teo, ohatra, no farany nisy Magnésium teto aminay. Miandry ny fahatongavan’ny fanafarana manaraka izahay amin’izao fotoana izao. Tsy hatahorana kosa ireo fanafody hafa sady mijanona toy ny teo aloha ny sarany”, hoy ny mpitantana toerampivarotam-panafody teto an-drenivohitra.
Zoro fahasalamana Ny fiverenan’ny valanaretina eo amin’ireo efa voan’ny Covid-19
Fisokafana tendro manokana :: Orinasa dimy ambin’ny folo efa afaka mandray mpizatra asa